प्रधानमन्त्री ओली र पत्नी राधिकाको स्वीस बैंकमा खाता, सम्पत्ति पुग्यो १ अर्ब, कहाँ कहाँ छ लगानी ? – Pahilo Update
प्रधानमन्त्री ओली र पत्नी राधिकाको स्वीस बैंकमा खाता, सम्पत्ति पुग्यो १ अर्ब, कहाँ कहाँ छ लगानी ?
By sandesh sidha	 Last updated Mar 23, 2021
प्रधानमन्त्री ओली र पत्नी राधिकाको स्वीस बैंकमा खाता, सम्पत्ति पुग्यो ६६ करोड, कहाँ कहाँ छ लगानी ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यको स्वीजरल्याण्डको मिराबोद बैंकको जेनेभा शाखामा संयुक्त खाता रहेको खुलासा भएको छ । उनीहरुको सो खातामा करिब ६६ करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको विश्वभरको गतिविधि नियाल्ने ’ग्लोबल वाच एनालिसीस’ले जनाएको छ । उक्त खाताबाट उनीहरुले वार्षिक लाभांश वापत ठूलो रकम लिने गरेको ग्लोबल वाचको दाबी छ ।
ओली र राधिको संयुक्त नाममा खोलिएको सो खातामा ५.५ मिलियन डलर रहेको दावी गरेको ग्लोबल वाचले मुद्दती निक्षेप र शेयरमा गरेको सो रकमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले वार्षिक ६ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर लाभांश लिने गरेको उल्लेख गरेको छ ।
वार्षिक ६ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर लाभांस लिएकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पति ह्वात्तै बढेको पनि ग्लोबल वाचले जनाएको छ । साथै सन् २०१५ र १६ मा प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन चिनियाँ राजदुत वु चुन्ताईको सहयोगमा ओलीले कम्बोडियाको टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रकृया आरम्भ गरेको पनि ग्लोबल वाचले जनाएको छ ।
स्वीजरल्याण्ड बैंकमा पैसा राख्दा सम्पत्ति विवरण खुलाउनु नपर्ने भएपछि नेताहरुले स्वीस बैंकमा पैसा राख्ने गरेको चर्चा चल्दै आएको छ ।
क्यानडा नेपाल वाट
ओलीलाई कडा झड्का , ईश्वर र विष्णु पौडेलको छुट्टै भेला !